5 dhimasho ah, 5 dhaawac ah oo uu sababay qarax ka dhacay saldhiga bilayska ee magaalada Laascaanood. – Radio Daljir
5 dhimasho ah, 5 dhaawac ah oo uu sababay qarax ka dhacay saldhiga bilayska ee magaalada Laascaanood.
Janaayo 12, 2010 12:00 b 0
Laascaanood, Jan 12 – Qarax xoogan, oo diryankiisa laga maqlay abdi xaafadaha magaalada, ayaa fiidnimaadii caawa waxaa uu ka dhacay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. Qaraxan oo sida la sheegay ahaa qunbulad gacmeed la tuuray, lalana eegtay saldhiga dhexe ee magaalada Laascaanood ayaa gaystay khasaare baaxad leh oo isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyeed.
Saddex askari oo ka tirsan ciidanka Somaliland ayaa la sheegay in ay ku geriyoodeeen qaraxaasi, halka 5 kalena uu dhaawac ka soo gaadhey.
Khasaaraha xoogiisa ayaa la sheegay in uu gaaray ciidanka maamulka Somaliland ee iyagu ku sugnaa saldhiga xiligii la qarxiyey.
Qaraxa oo dhacay abaaro 7:30 fiidnimadii ee caawa ayaa dhawaqiisa laga maqlay guud ahaan magaalada Laascaanood; waxaana daqiiqado kadib markii qaraxu dhacay soo buux dhaafiyey magaalada maleeshiyaadka maamulka Somaliland ee iyagu gacanta ku haya magaalada, kuwaasoo rasaas ku furay suuqyada iyo goobaha dadku kusoo aruureen.
Magaalada ayaa lagu soo rogey bandow, waxaana meelaha qaar laga maqlayaa dhawaqa rasaasta ka dahcda qoryaha baabuurta la saaro ee baroomada, taasoo sida la sheegay ay ridayaan maleeshiyaadkii suuqa soo galay kaidb markii qaraxu dhacay.
Maaha markii ugu horeysey oo qarax Kan la mid ah uu ka dhaco magaalada Laascaanood; dabayaaqadii sannadkii ina dhaafay ayay ahayd markii qarax kan la mid ah lala eegtay hotel Dhiif ee magaalada Laascaanood, laguna dilay taliyihii ciidanka Somaliland ee gobolka Sool.
Laascanood oo 3-dii sano ee la soo dhaafay uu ka talinayey maamulka Somaliland ayaa waxaa ku soo badanaya qaraxyada iyo dilalka.
Dawlada Hoose ee Bossaso oo soo bandhigtay xog warran ku saabsan waxqabadka D/Hoose.
Afhayeenada Xisbul Islam & Ahlu Sunna oo aan ka waraysanay dagaal ku dhex maray Beledweyn.